Faaidooyinka Bunka Ee Kugu Kalifaya Inaad Balwad Ka Dhigato | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Faaidooyinka Bunka Ee Kugu Kalifaya Inaad Balwad Ka Dhigato
Sep 29, 2014 - Comments off	Bunka waxa laga sameeyaa midho la dubay oo ka baxa dhirta cagaaran ee bunka, waana cabitaanka saddexaad ee dunida , oo shaaha iyo biyaha oo kaliya ayaa ka horeeya , waxaana uu ka mid yahay waxyaabaha dadka u noqday belwada ama ay inta badan isticmalaanaan . Waxaana lagu tilmaamaa inuu leeyahay faaiidooyin badan , qurbo.net waxay halkan ku soo qaadanaysaa kuwan soo socda.
1. Bunku waxa uu gubaa duxda:Bunka waxaa ku jira maado kiimiko ah oo loo yaqaano “Caffeine” oo duxda jidhka ku jirta gubta , taas oo kur u qaada gubista uu jidhku gubayo duxda ku jirta qiyaas ahaan 10-29%
2. waxa uu kordhiyaa awooda hawl- qabad: Bunka maaddooyinka ku jira waxay kordhiyaan shaqadda dheecaamad jidhka , markay dhiiga ku darsamaan waxay u noqdaan shiidaal sidaa darteed hadii aad saacad iyo badh ka hor sii cabto koob bun ah inta aadan bilaabin jimicsiga ama hawl kasta oo aad qabanayso , aad bay kuu caawinaysaa . Firfircoonida uu qofku dareemayo marka uu cabbo bunka waa ta sababaysa in la qabatimo oo maalin kasta la doonto
3. Bunku waxa uu yareeyaa khatarta macaanka: Cilmi baadhis badan oo la sameeyay waxa ay daboolka ka qaadeen , in qofka bunka cabaa uu ka khatar yar yahay qofka kale inuu ku dhaco nooca labaad ee macaanku .
4. Waxa uu ka hor tagaa Cancer-ka: Cilmi-baadhayaal ka soo jeeda dalka Talyaaniga ayaa baadhitaan waxaa ay ku sameeyeen bunka ama qaxwada, iyadoo 3000 oo qof tijaabo lagu sameeyay.
Si arrintan xaqiiqdeeda loo gaadhay ayaa tijaabo waxaa lagu sameeyay ilaa saddex kun qof oo dhalinyaro u badan.
Cilmi-baadhayaasha waxaa ay xuseen, qofkii si joogto ah u isticmaala bunka ama(qaxwada) qof walba sida uu uyaqaan in uu ka bebaadi karo %50 [Canser-ka] ku dhaca dhanka beerka. Waxaa ay sidoo kale ka hortagtaa Bunka cuduro kale.
Daaraasad hore ay u soo saareen Saynisyahano Mareykan ah, waxaa ay sheegtay qofkii maalintii caba 4 koob oo bun ah in uu ka bedbaadi karo cudurka Canser-ka.
Tani ayaa waxaa ay keentay dalalka hormaray in ay ku bataan dadka isticmaala bunka